रजत विजेता नेपाली टोलीलाई नगरपरिक्रमा सहित सम्मान गरिने | Sagarmatha TV
रजत विजेता नेपाली टोलीलाई नगरपरिक्रमा सहित सम्मान गरिने
काठमाडौं । चार वर्षपछि चीनको हान्जोउमा भेट्ने वाचासहित १८औं एसियाली खेलकुद समापन भएको छ । इन्डोनेसियाको राजधानी जाकर्ताको गेलोरा बुङ कार्नो रंगशालामा १८ औं एसियाली खेलकुदको एक भव्य समारोहबीच समापन भयो । आइतबार भएको भव्य समारोहमा कोरियाका पप स्टार सुपर जुनियर र आइकोनले आफ्नो शानदार प्रस्तुती दिएका थिए । यस्तै भारतीय कलाकार सिद्धार्थ स्लाथियाले पनि आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए । यस्तै इन्डोनेसियन कलाकारहरु इसीयाना सरास्भाती, बुङगा सित्रा लेस्तारी, लिया सिभाजुथाङ, डेनाडा, डिरा सुगान्डी, जेफ्लो र अफगानले आफ्नो प्रस्तुतीमार्फत भरपुर मनोरञ्जन दिएका थिए ।
समापन समारोहमा एसियाली खेलकुदमा सहभागी ४५ देशका खेलाडी, अफिसियल, अतिथि,पत्रकार र दर्शक गरी ५५ हजार उपस्थित थिए । यस्तै समारोहमा इन्डोनेसियाको संस्कृति झल्कने भेषभूषामा स्थानीय खेलाडी, अफिसियल र दर्शक उपस्थित भएका थिए । यस्तै सहभागी देशका खेलाडी तथा अफिसियल मार्च पास गरेका थिए । नेपालको तर्फबाट टेबलटेनिस खेलाडी स्वेच्छा नेम्वाङले झन्डा बोकेकी थिइन् ।
गत १८ अगस्टदेखि आइतबारसम्म इन्डोनेसिया र पालेङबाङमा चलेको एसियाली खेलकुदमा ४५ देशका ११ हजार ३ सय खेलाडीले ४० खेलको ४ सय ५६ स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यसपटकको एसियाली खेलकुदमा पनि चीनले आफ्नो वर्चश्व जमायो। चीनले १ सय ३२ स्वर्ण, ९२ रजत र ६५ कास्य गरी कुल २ सय ८९ पदक जित्यो। पदक तालिकाको दोस्रो स्थानमा जापान रह्यो। जापानले ७५ स्वर्ण, ५६ रजत र ७४ कास्य गरी कुल २ सय ५ पदक हात पार्यो । दक्षिण कोरियाले ४९ स्वर्ण, ५८ रजत र ७० कास्य गरी जम्मा १ सय ७७ पदक जित्न सफल भयो। चौथो स्थानमा आयोजक इन्डोनेसिया रह्यो। उसले ३१ स्वर्ण, २४ रजत र ४३ कास्य गरी कुल ९८ पदक हात पा¥यो ।
नेपालले भने १ रजत पदक मात्र जित्न सक्यो। नेपालले प्याराग्लाइडिङको पुरुष क्रस कन्ट्री टिम इभेन्टमा रजत जित्यो । यसअघिका एसियाली खेलकुदमा नेपालका लागि पदक जित्दै आएका तेक्वान्दो, कराते र बक्सिङ यसपटक पदकविहीन रहे । नेपाल १२ औं दिनसम्म पदकविहीन बन्नु परेको थियो। यसपटक देखि समावेश गरिएको प्याराग्लाइडिङबाट रजत जित्दा नेपालले २० वर्षपछि दोस्रो रजत जितेको हो । सहभागी ४५ देश मध्ये ३७ देशले मात्र पदक जित्न सफल भए। १ रजत जितेकाले नेपाल पदक तालिकाको ३३औं स्थानमा रह्यो । ८ देशले पदक जित्न सकेनन् ।
सार्क राष्ट्रमा भारतले १५ स्वर्ण, २४ रजत र ३० कास्य गरी जम्मा ६९ पदक जित्न सफल भयो। भारत पदक तालिकाको आठौं स्थानमा रह्यो। एसियाली खेलकुदमा यो भारतको सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन हो। पाकिस्तानले ४ कास्य जित्दा अफगानिस्तानले २ कास्य जित्यो। अन्य सार्क देश श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान र माल्दिभ्सले पदक जित्न सकेनन् । समारोहमा सन् २०२२ को एसियाली खेलकुद आयोजना गर्ने चीनको होन्जाउ प्रान्तका प्रमुखलाई एसियाली खेलकुदको झन्डा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
यसैबीच एसियाडमा रजत जित्न सफल भएको नेपाली टोलीलाई भव्य स्वागतसहित नगर परिक्रमा गराई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले यस अघि नै घोषणा गरे अनुरुप पदक विजेता प्याराग्लाइडिङ टोलीलाई नगद ५ लाख सहित पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
एसियाडमा २० बर्षपछि रजत पदक दिलाएको प्याराग्लाइडिङ टिमका खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पहिलो चरणमा ५ लाख दिने भएको हो । एसियाडमा पदक जित्ने खेलाडीलाई परिषद्ले नगद पुरस्कार दिने नियम अनुसार खेलाडलाई जनहि ५–५ लाख दिने भएको हो । परिषद्को नियममा एसियाडको समुहगत स्पर्धामा स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई जनही १० लाख, रजत जित्नेलाई ५ लाख र कास्य जित्नेलाई ३ लाख दिने घोषणा गरेको थियो ।
सोही नियम अनुसार परिषदले विजेता खेलाडी नेपाल फर्किएको दिन नै नगरपरिक्रमा गरेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को प्रांगणमा खेलाडीलाई सम्मान गरिनेछ । राखेपले पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई ५ लाख, प्रमुख प्रशिक्षकलाई ३ लाख, सहायक प्रशिक्षकलाई एक लाख ५० हजार र संघलाई ५ लाख दिने भएको छ । एसियाडमा पहिलो पटक सहभागिता जनाएको प्याराग्लाडिङमा नेपालले रजत जितेर नेपाललाई पदक विहीन हुनबाट जोगाएको हो ।
लागुऔषध खैरो हिरोइनसहित कैलालीबाट २ युवती पक्राउ
निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी रेष्टुरेण्ट संचालन गर्नेलाई २७ हजार जरिवाना
भोजभतेरका कारण म्याग्दीमा फैलियो कोरोना
हात्तीको आक्रमणबाट झापामा एक जनाको मृत्यु
बारामा दुई जना बालकको हत्या
दैलेखमा जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु
सर्वोच्चको आदेश : उपचार अभावले मृत्यु हुने अवस्था नआओस्
भारतमा दैनिक घट्न थाल्यो कोरोना संक्रमण दर, मृतकको संख्या घटेन
यी ५ सय बढी सक्रिय संक्रमित रहेका नेपालमा ३७ जिल्लामा
भारतमा कोरोनाविरुद्ध नयाँ औषधि विकास
स्वास्थ्य मन्त्राालयले भन्यो : नेपालमा केही साता अझै चुनौतीपूर्ण
सरकारको ध्यान कमिसनमा मात्रै रहेको सभापति देउवाको आरोप
हिमाली जिल्ला हुम्लामा फैलियो कोरोना संक्रमण
काठमाडौँ उपत्यकामा तेस्रो चरणको निषेधाज्ञा, घर बाहिर निस्कन नपाइने, के-के छ आदेशमा ?
भारतबाट किन आएन १० लाख डोज खोप नेपाल ?
परपुरुषसँगको सम्बन्धले खानामा विष हालेर श्रीमानको हत्या
पूर्वरानी कोमल शाहको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रीदै, प्रतिमिनेट १० लिटर अक्सिजन दिइँदै
आजको राशिफल, पञ्चांग र शुभ साइत (२०७८ वैशाख १९ आइतबार)
यातायात व्यवसायीले भने, हवाई उडान बन्द नभए गाडी पनि बन्द गर्दैनौं
काठमाडौं केन्द्र बनाएर भूकम्प
आजको राशिफल, पञ्चांग र शुभ साइत (२०७८ वैशाख २१ मंगलबार)
हत्या आरोपमा गुल्मीमा ३ जना पक्राउ
ओलीलाई प्रचण्डको फोनः यो के तमासा गर्नुभएको ?
कति पारिश्रमिक लिन्छन् ‘इण्डियन आइडल’का निर्णायक ?
कोरोनाले भारतमा अर्की एक पत्रकार तथा अभिनेत्रीको निधन
नेपालका यी ३३ जिल्ला कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा